I-Emu Point Beach Front Cottage - I-Airbnb
I-Emu Point Beach Front Cottage
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Ben
* * Sicela uqaphele ukuthi sishintshela kuleli khasi elisha kusukela ngomhla ka-1 Meyi 2020. Konke kuhlala kunjalo!!! U-Ben uzoqhubeka nokusingatha ukubhukha kwethu.
I-Emu Point Beach Front Cottage iyindlwana enamakamelo okulala angu-2 eyakhiwe cishe. Eminyakeni engu-80 eyedlule futhi yalungiswa ngokugcwele ngo-2010. Besilokhu siziqhenya ngabanikazi kusukela ngo-1983!
Itholakala ngaphesheya komgwaqo ukusuka ebhishi e-Emu Point, ukuphumula okuphelele kuqhele ngebanga elifushane. I-Emu Point Beach Front Cottage ikubuyisela emuva ezinsukwini ezinhle zakudala zokuhlala ebhishi.
Indlwana inamakamelo okulala angu-2 ngaphambili kwendlu. Ikamelo lokulala elilodwa eliyinhloko elinombhede weNdlovukazi negumbi elilodwa elinemibhede emibili elala umuntu oyedwa. Omabili amagumbi anokushisisa.
Kukhona igumbi lokuphumula nelokudlela elinomabonakude. Ikhishi litholakala eceleni kwezindawo zokuhlala nezokudlela futhi lihlanganisa ifriji, uhhavini, isitofu, i-microwave nezitsha.
Indlu ayibiyelwe. Sicela uqaphele lokhu uma unezingane ezincane. Kuzodingeka ziphathwe egcekeni elikhulu elingemuva. Azikho izindlwana ezitholakalayo. Ngaphandle kwalokho le ndlu ifanele izingane.
I-Emu Point yindawo yokukhipha amapulagi ngakho ayikho i-WiFi etholakalayo.
* * Ukuze ubuke ukuphawula kwezivakashi zethu zangaphambilini sicela uvakashele indlu yethu endala lapha:
https://www.airbnb.com.au/rooms/11wagen * * Ushintsho Ezindlini lubangelwa izizathu zokuphatha ngaphakathi kwesistimu ye-Airbnb. Umndeni wakwaWatson uyajabula ukuqhubeka nokwamukela Izivakashi zethu Endlwaneni yethu.
I-Emu Point iyindawo enokuthula, cishe amakhilomitha angu-8 ukusuka e-Albany City Centre. Indlwana itholakala endaweni ethandwayo, yeqa futhi ugxume ebhishi, uhambo olulula oluya endaweni lapho i-WiFi yamahhala itholakala khona.
Kunamasevisi alinganiselwe e-Emu Point, ngakho-ke situsa ukudla neziphuzo zakho ngokwesidingo. Izitolo ezinkulu ziyatholakala e-Bayonet Head eseduzane (imizuzu engu-7 ngemoto), e-Spencer Park (imizuzu engu-8 ngemoto) nase-Albany City Centre (imizuzu engu-11 ngemoto).
Ngeke sitholakale mathupha, noma kunjalo sinomnakekeli otholakala 24/7 uma udinga usizo phakathi nokuhlala kwakho. Ungaxhumana nathi futhi ocingweni lwethu uma kunesidingo.